Maxakamada kutaala Jarmalka oo xukun ku riday dad ku eedeysan falal argagixisanimo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maxakamada kutaala Jarmalka oo xukun ku riday dad ku eedeysan falal argagixisanimo
Maxakamada kutaala Jarmalka oo xukun ku riday dad ku eedeysan falal argagixisanimo
Jarmalka(SONNA) Wadanka Jarmalka ayaa Maxkamad ku taala waxaa ay xukun xabsi ah ku riday koox hubaysan oo la sheegay inay ka dagaalameen wadamada Syria iyo Soomaliya kuwaasi oo ay soo qabteen laamaha ammaanka Dalkaasi.
Waxaa kamid ahaa koxdaasi nin Soomaali ah oo qaatay dhalshada Dalkaasi Jarmalka, Xeerbeegtida ayaa soo jeedisay in ninkaan oo ku dhashay magaalada Muqdisho qaatay jinsiyada dalka Germany uu wajaho 3 sano iyo bar oo xabsi ah.
Maxkamadu waxay sheegtay in Abshir uu 4 bilood ku tababaranayay saldhig ay maamulaayen Al-shabab 2012-ka,si uu uga qeyb qaato dagaalada y hurinayaan Shabaabka.
bayaan ka soo baxay xafiiska Qaadiga 1-aad,Maxkamada Farankfort ee Caasimadda Dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in Abshir Axmed oo 29 sano jir uu ka qeyb qaatay dagaaladii ka dhacaayay Soomaaliya intii u dhaxeeysay 2012-ka ilaa 2014 waxana ay ku riday xukun gaaraya 2 sano iyo 10 bilood oo xabsi ah.
Qareeniadii u doodayay ninkaan ayaa sheegay in Abshir uu xaalad caafimad uga soo baxay Al-shabaab uuna beeninayo inuu u dagaalamay dagaalamayaashoodi.
Sidoo kale Maxkamada ayaa waxa ay xukun 2 sano iyo 8 bilood ay ku riday muwadin u dhashey dalka Turkiga,kaasi oo la sheegay in uu ka bar bar dagaalamay kooxda Daacish ee Syria ku sugan.
Previous articleDowladda Spain oo kala dirtay baarlamankii Catalonia
Next articleMarconi:Aasaasaha Raadiyaha Casriga ah ee maanta.